Experience Europe's Best Food Places | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများတွေ့ကြုံခံစား
ဥရောပတိုက်ကြီးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? ဘယ်အစားအစာ pic ရပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ Instagram အကြိုက် 100 ရဲ့ဖွင့်ယူပြီး? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း Picks နှင့်အတူဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများတွေ့ကြုံခံစား!
1. ဥရောပရဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ – ဂရိနိုင်ငံ
ဂရိနိုင်ငံအတွက်ဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများတွေ့ကြုံခံစား. အဘယ်သူသည်ဖြစ်နိုင်သည်အစားအစာ-ဖြည့် filo pastry မကြိုက်ပါနိုင်ပါတယ်? ဂရိအစားအစာအပြစ်တင်ရန်ခဲယဉ်းသည်နှင့်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့သမိုင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်. တိုင်းပြည်၏ အချက်အပြုတ်ယဉ်ကျေးမှု အုပ်ဖြစ်ရမည်မှစဉ်းစားသည် 4,000 အသက်အနှစ်. သငျသညျအတှေ့အကွုံရိုက်နှက်မနိုင်ကန့်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့် ဥရောပရဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ.
သင်စွန့်ခွာယခုအချိန်တွင် ဘူတာရုံ, သငျသညျပြီးသားအံ့သြဖွယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခင်းကျင်းတွေနဲ့တရစပ်နေ. ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာ. စက်ဘီးငှားရမ်း. လှမ်း 2. သင့်ရဲ့နှာခေါင်းကိုသင်ကြာဘယ်မှာစီးနင်း! ဥရောပရဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ၌ရှိကြ၏ အမ်စတာဒမ် တစ်ဘို့ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး. ကိစ္စမရှိပါဘူး သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်, လူတိုင်းအတွက်အရာတစ်ခုခုရှိမယ့်! သင် ... နိုင်သည် တစ်ပါတ်အဘို့သွားရောက်ကြည့်ရှု နှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာလမ်းရယူထားသောနှင့်စျေးကွက်စျေးနှုန်း၏ချွတ်ဝမ်းစာ.
ဘယ်မှာစတင်ရန်မသိကြ? မြို့တော်ရဲ့အများအပြား herring လှည်း၏တဦးတည်းအနေဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ herring တစ်ပန်းကန်နှင့်အတူအမ်စတာဒမ်အစားအစာမြင်ကွင်းတစ်ခုတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနိဒါန်း Get သို့မဟုတ် herring ကုန်သွယ်ရေး. ဒါကြောင့်ငါးပြုတ်ရဲ့ အကယ်. ကြိုးစားကြပြီးတော့တပ်မက် kibbeling. ထိခိုက်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော-ကြော်အဖြူငါးတစ် Mayonnaise ငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်. အချိုပွဲအတွက်. Bakeries ၏ 100 ရဲ့မဆိုသို့ Pop.
သငျသညျ savory တစ်ခုခုရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျအတိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဒိန်ခဲအဘို့ options များ. သူတို့ကတိုင်းလမ်းထောင့်အပေါ်စာသားများမှာ. ငါတို့အကြိုက်ဆုံး? တစ်ဦးက ရည် waffle နှစ်ခုပါးလွှာ waffles ၏ဖွဲ့စည်း, အတွင်းပိုင်း gooey ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အတူနက်ရှိုင်း - အမှုန့်သကြားနှင့်အတူထိပ်ဆုံး.
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပင်အီတလီနိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်ဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများနာမည်စဉ်းစားနဲ့လို့မရဘူး! ပိုပြီးအထင်ကရအစားအစာအတူဥရောပတိုင်းပြည်ရှိပါသလား? ဟယ်လို, carbs! ပီဇာနှင့်ခေါက်ဆွဲသည်လူတိုင်း၏စာရင်းတွင်ရှိသည်! တိုင်းဒေသတိုင်း၌၎င်း၏အထူးရှိပြီးရာသီမှီခိုကြောင်းသတိရပါ.
4. ဥရောပရဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ – ပြင်သစ်
လိုင်ယွန်, အဖြစ်လူသိများ ပြင်သစ်'' s ကို အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်မြို့တော် ပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်မည်သည့်အခါမျှ, နှင့် လန်ဒန်တိုက်ရိုက်ရထား ရန်သင့်အား whisk လိမ့်မည်ဟုနှင့် TGV ဆက်သွယ်မှု ပဲရစ် သို့မဟုတ် မာဆေး နှစ်နာရီအောက်မှာအတွက်. သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးစွန့်စားခံစားနေကြ? ကောင်းသော! ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအားရစရာရှိ! ဒေသခံအထူးထွက်ကြိုးစားပါ; ခါးစညျးရှေ့ဖုံး sapper (breaded tripe), ထို့နောက်မြို့ပေါ်မှာအနည်းငယ်အချိုရည်များအတွက်အစဉ်အဆက်-လူကြိုက်များ Croix-Rousse ခရိုင်မှတစ်ဦးအလည်အပတ်အတူကထွက်ချွတ်ပြီးစီးခြင်း.
ဤသည်ဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သတိပေးမရှိပဲမလာပါဘူး: “ entrée” ကို“ အခြားဟင်းလျာ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရရန်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်သုံးနိုင်သည်,"ဒါပေမယ့်ပွငျသစျထဲတွင်, ဒါဟာအမှန်တကယ် "ကိုဆိုလိုသည်appetizer.အဓိကဟင်းအဘို့အ plat "" appetizer နှင့်အတှကျ "entrée" ဒါနှင့်အတူကပ် ", သငျတို့သအပြည့်အဝအစာအိမ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအခြားဘက်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့က Brexit ၏ရလဒ်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်လန်ဒန်ရဲ့အစားအသောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုနေဆဲဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. လန်ဒန်မြင်ကွင်းတစ်ခု ရိုးရာအချက်အပြုတ်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ mish-mash နှင့်ခေတ်မီဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါသည်. အနည်းဆုံးနေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မသောက်ဘဲလန်ဒန်သို့အစားအစာဗဟိုပြုသည့်ခရီးစဉ်မပြီးဆုံးပါ, ခါးသီးမှုတစ်ခုပိုင့ဒါမှမဟုတ်တချို့ takeaway ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည့်ရပ်ကွက်အတွင်းအရက်ဆိုင်မှာတနင်္ဂနွေကင် ငါးနှင့်ချစ်ပ် မြို့တော်ရဲ့အများအပြား '' chippies တစ်ဦးမှ။’ Michelin-ကြယ်ပွင့်မီးဖိုချောင်ကပိုသင့်ရဲ့အရာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေတုန်းပဲနေ. လောလောဆယ်ဗြိတိန်တွင် Michelin ကြယ်သုံးပွင့်ရှိသောစားသောက်ဆိုင်ငါးဆိုင်ရှိသည်. အဆိုပါရေနားအင်း, Alain Ducasse အဆိုပါ Dorchester မှာ, အဆိုပါ Araki, စားသောက်ဆိုင်ဂေါ်ဒွန် Ramsay, နှင့် The ဆီ Duck.
သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးတုန်လှုပ်နေကြသည်? သင့်ရဲ့အစာအိမ်အတွက်မျှော်ညျးသံဖြစ်ပါတယ်? သင်၏နောက်ရထားစွန့်စားမှုများ၏အကူအညီဖြင့်ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့အချက်အပြုတ်, ကောင်းကင်ဘုံမှဘွတ်ကင်လုပ်ရန် SaveaTrain. အောက်မှာအတွက်စာအုပ်3အဘယ်သူမျှမဘွတ်ကင်အခကြေးငွေနှင့်အတူမိနစ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperience-europes-best-food-spots%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
europetravel အစားသောင်းကြမ်းသူ လန်ဒန် longtrainjourneys လိုင်ယွန် ရထားခရီးသွား travelamsterdam travelfrance